မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, the American aluminum industry has focused on the development of automobile aluminum | YK လူမီနီယမ်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, the American aluminum industry has focused on the development of automobile aluminum
Since 2013, the American aluminum industry has investedahuge amount of money to build automobile production lines and increase the output of high-end aluminum. ကနေ 2013 ရန် 2017, the investment roughly amounted to $2.3 ဘီလီယံ, adding 1,500 direct fixed jobs.
၌ 2017, အမေရိကန်. aluminum industry accounted for 1% of GDP and employed 161,000 people directly.
Between 2009 နှင့် 2016, demand for aluminum in the United States and Canada rose by 40 percent and continues to grow, especially in the automotive industry.
မတ်လတွင် 2017, Kobe Aluminum Automotive products invested $5.3 billion to expand capacity at Bowling Green (KY) forging co., ltd. in Bowling Green, KY., to increase production of Aluminum alloy forgings for vehicle suspension systems and meet the growing demand of the Automotive industry.
The project will cost $5.7 ဘီလီယံ.
မတ်လတွင် 2015, kenlian aluminum said it was investing $40 million to expand its Van Buren automotive structure plant in Michigan.
ဇန်နဝါရီ 31, 2021 မှာ 7:49 ည
ဟယ်ရီ, ငါရှာဖွေနေခဲ့ရာပါပဲ, ဘာပစ္စည်းလဲ!
present here at this webpage, ဒီဝဘ်စာမျက်နှာ၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ် admin.
ငါ့ blog post – စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်
ဖေဖော်ဝါရီ 01, 2021 မှာ 5:33 နံနက်
a famous blogger when you are not already. မင်္ဂလာပါ!
ဖေဖော်ဝါရီ 02, 2021 မှာ 2:38 နံနက်
wow ကြောင်းထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်. ငါတကယ်ရှည်လျားသောမှတ်ချက်ရေးသားခဲ့သည်ပေမယ့်ငါကနှိပ်ပြီးနောက်တင်ပြရန်, ငါ့မှတ်ချက်ပေါ်လာပါဘူး.
ချစ်သူ… ကောင်းပြီငါနောက်တဖန်အပေါငျးတို့သကျော်ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ရုံအံ့သြစရာဘလော့ဂ်ပြောချင်တယ်!
ဖေဖော်ဝါရီ 02, 2021 မှာ 7:04 ည
ဒါကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်, You are an overly professional
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ: စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ် (http://မင်္ဂလာပါ)
ဖေဖော်ဝါရီ 02, 2021 မှာ 7:10 ည
ဂရိတ်စည်းချက် ! I would like to apprentice even as
ဝက်ဘ်ဆိုက်? The account aided meaappropriate deal.
ငါ့ website: စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်
ဖေဖော်ဝါရီ 03, 2021 မှာ 9:15 ည
အရင်က. So wonderful to find someone withafew original thoughts on this subject.
တကယ်ပဲ. ဒီတက်စအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. This web site is one thing that’s
ဝဘ်ပေါ်တွင်လိုအပ်သည်, မူရင်းတစ်နည်းနည်းနှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး က!
ငါ့စာမျက်နှာကိုလှမ်းဝင်ရန်အခမဲ့ – စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ် (http://tinyurl.com/yxg8mtur)
ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2021 မှာ 8:15 နံနက်
ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2021 မှာ 10:40 နံနက်
ကျွန်ုပ်အစ်ကိုကဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်. He was
totally right. ဒီ post ကတကယ်ပဲငါ့နေ့ကိုလုပ်လေ၏. You can not imagine
just how much time I had spent for this info! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက် :: စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ် (မင်္ဂလာပါ)
မတ် 05, 2021 မှာ 11:45 ည
မင်္ဂလာပါ ယေဘုယျ tadalafil
မင်္ဂလာပါ 40 နေ့စဉ်မီလီဂရမ်
မတ် 08, 2021 မှာ 7:29 ည
ဆရာဝန်ဆေးညွှန်းမပါဘဲယေဘုယျဆေးပြား: https://genericwdp.com/ india ဆေးဆိုင်မေးလ်အမိန့်
မတ် 09, 2021 မှာ 7:59 ည
ဆရာဝန်မပါပဲညွှန်းထားတဲ့ဆေးတွေ: https://genericwdp.com/ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းနိုင်ငံတကာဆေးဆိုင်အိန္ဒိယ
မတ် 10, 2021 မှာ 5:02 ည
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ – ဝက်ဘ် hosting
မတ် 11, 2021 မှာ 8:13 ည
ယေဘူယျ Viagra ကိုအွန်လိုင်းဝယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာ ကောင်တာ Viagra ကျော်အကောင်းဆုံး
Viagra အွန်လိုင်း usa ဝယ်ပါ
မတ် 12, 2021 မှာ 6:38 ည
ကနေဒါကနေ Viagra ယေဘုယျ 100mg Viagra ကိုဝယ်ကြလော့
မတ် 13, 2021 မှာ 5:18 ည
Viagra ဘယ်လောက်လဲ ကောင်တာကျော် Viagra
မတ် 14, 2021 မှာ 3:05 ည
Viagra အွန်လိုင်းကနေဒါဝယ်ပါ Viagra 100mg စျေးနှုန်း
မတ် 15, 2021 မှာ 11:31 နံနက်
won webpage. ဂိမ်း ps4 185413490784 ဂိမ်း ps4
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်: ပန်းချီဆရာ – နည်းနည်း,
မတ် 15, 2021 မှာ 1:30 ည
ကောင်တာ Viagra ကျော် Viagra ၏ကုန်ကျစရိတ်
ကောင်တာ Viagra ကျော်
မတ် 16, 2021 မှာ 7:13 နံနက်
ဤအရာကိုမကြာမီပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်သေချာစေပါ. ဂိမ်း ps4 allenferguson ဂိမ်းများ ps4
hydroxychloroquine 25 မီလီဂရမ်
ဇူလိုင် 26, 2021 မှာ 5:15 နံနက်
ကျောက်တံတား 25 မီလီဂရမ်
ကျောက်တံတား 200 မီလီဂရမ်တက်ဘလက်
ဝယ်ပါ 36 hour cialis
ဇူလိုင် 31, 2021 မှာ 9:25 နံနက်
သြဂုတ် 02, 2021 မှာ 1:00 ည
viagra cialis နမူနာအထုပ်
သြဂုတ် 25, 2021 မှာ 7:06 နံနက်
အယုံကြည်ရဆုံး canadian အွန်လိုင်းဆေးဆိုင်များ
စက်တင်ဘာ 06, 2021 မှာ 12:46 ည
စက်တင်ဘာ 15, 2021 မှာ 3:25 နံနက်
အောက်တိုဘာ 09, 2021 မှာ 3:36 နံနက်
အောက်တိုဘာ 09, 2021 မှာ 10:53 နံနက်